I-High-Shear Mixers Yokukhiqiza Amazinyo - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhiqizwa kwamazinyo kuyinqubo edingayo edinga imishini yokuxuba ekwazi ukuphatha izinto ezinamathisela ezibukekayo, ukugxila okuphezulu okuqinile nezinhlayiya ezilimazayo. Ama-mixer e-shear high-shear ahlinzeka ngamandla amakhulu okushefa okunikeza ukumanziswa okuphelele kwe-powders, i-homogenisation efanayo yama-colloidal slurries kanye nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana. Kutholakala esikalini sezimboni futhi sikwazi ukucubungula imifudlana emikhulu yevolumu, ama-mixers e-high-shear e-ultrasonic yihhashi lakho lomsebenzi elithembekile ekukhiqizeni umuthi wamazinyo!
Izinongo zokuxubha amazinyo, amazinyo okufakelwa kanye nama-gel aqukethe izingxenye ezine eziyinhloko zamanzi, ama-abrasives, ama-fluoride kanye ne-detergents. Ngenkathi okuqukethwe kwamanzi kuhluka kakhulu phakathi kwama-20 no-45%, ama-abrasives yizona zinto eziyinhloko ezinikela okungenani ngama-50% ekwakhiweni kwamazinyo. Ama-abrasives asetshenziswa kabanzi afaka izinhlayiya ze-aluminium hydroxide (Al (OH)3), i-calcium carbonate (CaCO3), i-sodium carbonate, i-phosphates ehlukahlukene ye-calcium hydrogen, i-hydrate silicas, i-zeolites, i-mica, ne-hydroxyapatite (Ca5(PO4) 3OH).
Ukwenziwa kwamazinyo okuvamile nokwenziwa kwamazinyo kwenziwa ngokuvamile kulandela lezi zinyathelo ezingezansi:
Ekuqaleni, amanzi, umswakama (isib. I-sorbitol, i-glycerin, i-propylene glycol) nezinye izithako zetshezi zihlanganiswa ndawonye ukuze kutholakale isisekelo soketshezi.
Ukuthola ukwakheka kwe-rheology annd kokuthanjiswa kokugcina kwamazinyo, izinguquko ze-rheology kanye nezibophezeli zengezwa kwisisekelo soketshezi. Ama-Rheology modifiers kanye nezibophezeli anika umuthi wokuxubha ubukhulu bawo nokuthungwa kwawo. Ama-binders asetshenziswa kakhulu afaka i-karaya gum, i-bentonite, i-sodium alginate, i-methylcellulose, i-carrageenan ne-magnesium aluminium silicate. Amanye ama-rheology modifiers adinga ukuhlanganiswa ngaphambi kokunye noketshezi olungelona olunamanzi njenge-glycerine noma ukunambitheka kwamafutha abalulekile. Ngenye indlela, i-rheology modifier ingahlanganiswa nezinye izithako eziyimpuphu ukuze kube lula ukusabalalisa kwe-colloidal.
Esinyathelweni esilandelayo, izithako ezisebenzayo (isb. I-calcium fluoride, i-zinc chloride, i-hydroxyapatite), izithasiselo zokunambitheka ezinambitheka kanye neziqholo zixutshwe ekuxubeni.
Ngemuva kwalokho, udaka oluqukethe izinhlayiya ezi-abrasive kanye / noma ukugcwaliswa kufakwa enhlanganisweni yamazinyo. Njengoba ama-abrasives ayisithako esiyinhloko, afakwa kumthwalo oqinile ophakeme, ukuxubana okunamandla, okunokwethenjelwa kwesheya eliphezulu kuyadingeka ukufeza lo msebenzi odinga amandla.
Ngemuva kwalokho, kufakwa i-flavour nokufaka imibala.
Esinyathelweni sokugcina sokuxuba, okokuhlanza noma okokuhlanza (okusebenza amagwebu) okusebenza njengesiqinisi futhi kuthuthukise ukusatshalaliswa okufanayo komuthi wokuxubha ngesikhathi sokuxubha amazinyo, kungezwa ekwakhiweni. Okokuhlanza kanye ne-sudser kuxubene nomxube wamazinyo ngamandla aphansi ukunciphisa amagwebu. Ama-sudsers ajwayelekile yi-sodium lauryl sulfate, i-sodium lauryl sulfoacetate, i-dioctyl sodium sulfosuccinate, i-sulfolaurate, i-sodium lauryl sarcosinate, i-sodium stearyl fumarate, ne-sodium stearyl lactate.
Ukwakheka okujwayelekile komuthi wokuxubha amazinyo kuqukethe:
Ama-humectants (isib. Sorbitol, glycerin)
Ukuzinzisa Abasebenza Kakhulu
Izinguquko ze-Rheology (thickeners)
Ama-Preservatives (isib. P-hydrozybenzoate)
Ngokuya ngohlobo lomkhiqizo womuthi wokuxubha, kunezelwa ezinye izithako ezisebenzayo ezinjenge-bactericides, i-whiteners, i-fluoride, njll.
I-UIP4000hdT, ingxubevange enamandla ye-4000watts ehlanganisa izimboni eziphakeme zezimboni ze-homogenization
Izinongo zemvelo, ezihlanzekile zelebula
Abakhiqizi bezithako zemvelo zemvelo benza imikhiqizo besebenzisa izithako zemvelo eziqinisekisiwe kanye / noma zemvelo kuphela. Imikhiqizo yemithi yokwenziwa kwamazinyo yemvelo ihlinzeka ngokufunwa ngabathengi abazi impilo, abafuna ukugwema izithako zokufakelwa ezivame ukutholakala ekuthambisweni kwamazinyo okuvamile. Ngenxa yesidingo sabathengi esisezingeni eliphezulu semikhiqizo yelebuli ehlanzekile, kuncane kakhulu futhi nemikhiqizo emikhulu eyaziwayo inikela ukunambitheka kwelebula elihlanzekile. Ama-mixer e-Ultrasonic alungele ukukala kokukhiqiza okuncane naphakathi naphakathi, futhi. Njengendlela yokuxuba engeyona eyokushisa, eyimishini kuphela, i-ultrasonication ayiguquli ukwakheka kwemvelo, okwemvelo. Ukuxubana kwe-Ultrasonic kuyahambisana nezithako zemvelo ezifana ne-baking soda, i-aloe vera, uwoyela ka-eucalyptus, imure, isitshalo esikhishwe (isb. Isage, i-mint, i-strawberry extract), namafutha abalulekile (isb. I-mint, i-spearmint, isinamoni).
Funda kabanzi mayelana ne-ultrasonic shear mixers yokukhiqiza imikhiqizo ehlanzekile-ilebula ubuhle!
Izinzuzo ze-Ultrasonic Toothping Mixing
Ukusingathwa Kokugxila Okuphezulu
Iphephile, Iqinile futhi Iyathembekile
Abahlanganisi be-shear ephezulu be-Ultrasonic basebenzisa inqubo efanayo yemishini njengamanye amasistimu wokuxubha ajwayelekile asetshenziswa ezimbonini, isb. I-shear blade mixers ephezulu, ama-multi-shaft mixers, ama-colloid mill, ama-homogenizer aphezulu, kanye ne-blade agitators. Izithako ezixubile eziphakeme kakhulu ze-Ultrasonic zivame ukusetshenziselwa ukuhlakaza nezinhlayiya zamamilimitha, ukugxilisa izigaba kawoyela namanzi, ukumanzisa nokuncibilikisa izinto eziqinile futhi kukhiqize ukuxubeka okungatheni kwanoma yiluphi uhlobo loketshezi kanye nesitimu. Abahlanganisi be-Ultrasonic badlulisela amabutho aphezulu-e-shear ngokusebenzisa isandiso se-ultrasonic esikebheni sokuxuba, njengethangi le-batch noma kwiseli yokugeleza. Isiprofetho sesihlanganisi se-ultrasonic siyanyakaza ku-ketshezi esikhungweni esiphakeme kakhulu kanye nama-amplopes ngaleyo ndlela sidale ama-bubble e-cavitation we-ultrasonic ophakathi nendawo. Ukuwa kwamabhamuza we-cavitation kuholela emandleni e-shear anamandla, okuphazamisa futhi kuphule amaconsi, ama-agglomerates, ama-aggregates, ngisho nezinhlayiya eziyinhloko. Njengoba i-ultrasonic cavitation ikhiqiza ukusakaza okuphezulu kwe-velocity cavitational okufika ku-1000km / h, ijezi eziwugqinsi ezihamba ngezinyawo zisheshisa izinhlayiya. Lapho izinhlayiya ezisheshayo zishayisana, isenzo leso siyimidiya yokugaya. Njengomphumela, izinhlayiya ezingqubuzanayo ziyaqhekeka futhi zincishiswa zibe usayizi we-micron- noma we-nano-size. Ensimini ye-ultrasonic cavitation, izingcindezi zishintshana ngokushesha nangokuphindaphindiwe phakathi kwe-vacuum kuze kufike ku-1000bar. Isixhumi esijikelezayo esinama-ruber ama-4 wokudidiyela sizodinga ukusebenza ku-300,000 RPM ukufezekisa imvamisa efanayo yokushintsha imijikelezo yengcindezi. Abahlanganisi abajwayelekile bomjikelezo nabahlanganisi be-rotor-stator abadali inani elikhulu le-cavitation ngenxa yokunciphisa kwabo ijubane.
Ukuxubeka Kwama-Ultrasonic Wokuxubha
Ama-mixers we-Ultrasonic high-shear angasetshenziswa njenge-batch kanye ne-processors eqhubekayo emgqeni. Kwizinto ezibonakalayo ezinamandla kakhulu nokucutshungulwa kwevolumu ephezulu, ukusetshenziswa kwe-reactor cell cell reactor kuyathandwa ngoba lokhu kukuvumela ukuthi usebenze ngaphansi kwezimo eziqinisiwe ze-ultrasonication (ie ingcindezi iqinisa i-cavitation). Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa ukusethwa kokugeleza okuyinkimbinkimbi njengendawo noma ukusethwa kwenqubo okuhlukanisiwe, ingxube ephelele yamazinyo iyaphoqeleka ukuthi idlule endaweni ye-ultrasonic cavitational in the flow cell. Lokhu kuqinisekisa ukuthi inhlayiya ngayinye ithola ukwelashwa okufanayo ukuze kutholakale ukusabalalisa nokuxubana okufanayo.
I-Ultrasonic Passage Processing
Kwesinyathelo ngasinye senqubo, okuthi lapho kuhlanganiswa khona isithako esisha engxenyeni engamanzi, ingxube yokunamathisela idlula isuka ethangini elilodwa idonsela ku-ultrasonic ithangi lesibili. Le nqubo yokudlula iqinisekisa umphumela onokwethenjelwa kakhulu nofana ngokufana. Ngenkathi ukuxubana okuningana kwe-batch ephezulu yokuxubha ibhethri kufanele kusetshenziswe ukuze kuqinisekiswe ukuthi zonke izinhlayiya ziyahlakazeka, ukusethwa kweseli yokugeleza kwe-ultrasonic yisikhathi sesikhathi namandla esonga amandla, ngoba isikhathi sokucubungula sincishiselwe ekwelapheni okuncane.
Ekuhlanganisweni kwe-batch ephezulu ye-shear ephezulu, ezinye izinhlayiya ziyacutshungulwa, ngenkathi ezinye izinhlayiya zingangeni endaweni esebenzayo yokuxuba. Kusetshenziswa i-ultrason flow cell reaction kuqinisekisa ukuthi inhlayiya ngayinye ibona ukwelashwa okugcwele okuphezulu. Ngenxa yenqubo yokudlula, yonke inhlayiya iphathwa imvamisa namandla amakhulu.
Icebo lokucubungula: Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic ngaphansi kwengcindezi
Ukufaka ingcindezi kwi-reactor ye-ultrasonic noma i-flow cell kuqinisa i-acoustic cavitation. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinhlobo ezahlukahlukene zokugeleza kweseli no-reactor, ezingacindezelwa kalula kuze kufike ku-5 barg. Ama-reactors e-ultrasonic enziwe ngezifiso angakwazi ukubhekana nezingcindezi eziphakeme kakhulu ezifika ku-300barg.
Imiphumela ye-Ultrasonic De-Aerating
Ama-Blade agitators kanye nabaxube abajwayelekile be-shear ephezulu bafaka amanani aphezulu wamabhamuza egesi enhlanganisweni, okuyinkinga enkulu. Ukwehliswa kwenhlanganisela yokugcina yamazinyo kudinga isinyathelo esengeziwe sokucubungula, esidla isikhathi namandla. Ngesikhathi sokuxubana kwe-ultrasonic, ukubanjwa kwamabhamuza omoya ngokuvamile kuphansi kakhulu uma kuqhathaniswa nama-agitators ajwayelekile wamathangi kanye nabaxube be-shear ephezulu. Ukusebenzisa i-ultrasonic flow cell reactor kuvimbela ukufakwa okungadingekile kwamabhamuza egesi angadingeki njengoba ingxube ifakwa kusuka ethangini lokubamba ngokugeleza okungaguquki kusistimu evaliwe. Ekusethweni kweseli lokugeleza kwe-ultrasonic, inhlanganisela yokunamathisela ifakwa ngokucindezela okuqhubekayo endaweni ye-ultrasonic cavitation. Ukusethwa kokugeleza kwe-ultrasonic kuvimbela ukubanjwa okungafuneki kwegesi ngesikhathi senqubo yokuxuba. Ngaphezu kwalokho, i-sonication iyindlela esungulwe kahle ye-de-aeration kanye ne-degassing futhi ithuthukisa ukuhlangana kwamabhamuza womoya ukuze akwazi ukukhuphukela phezulu futhi abe namandla.
Funda kabanzi mayelana ne-ultrason de-aeration kanye ne -assassing!
I-Ultrasonic flow cell Reactor e-ultrason high-shear mixer UIP4000hdT (4kW)
Isikali se-Nano-sodium calciumroroapatite sikhuliswe nge-ultrason homogenizer UP200ST (ama-30% ama-solids okuhlungwa, i-150Ws / g, i-10X yokukhulisa)
Abaxube be-shear high shear bakha amandla amakhulu okushefa, anomthelela odingekayo ezinhlayiyini ezifana nokuqina, amaconsi, amakristalu, kanye nemicu ukuze zikwehlise ngosayizi ohlosiwe, ongaba kubanga le-micron noma le-nano. Ukuphatha kalula ama-viscosities aphezulu kanye nemithwalo ephezulu eqinile, ama-mixers we-inline ephezulu ye-shear akulungele ukucubungula imikhiqizo yokunamathisela efana nezinto zokuxubha, ama-dentifrices nama-gel. Amandla we-acoustic shear afinyelela ukumanziswa okuphelele kwezithako ze-powder futhi azihlanganise ngokufanayo ekunamathiseni okufana.
Ngokuya ngobunzima bezinhlayiya nokuba brittleness, amapharamitha wenqubo we-ultrasonic angahle alungiswe ukuze kufezeke umphumela wokuxuba owafunwayo. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuxuba ezifana nama-high-shear blade agitators, ama-homogenizer ane-high-pressure, ama-colloid / ama-bead mixers, ama-shaft mixers njll. Abaxubeli be-shear ephezulu ye-ultrasonic banikela ngezinzuzo ezinkulu njengokuphathwa okungenazinkinga kwama-abrasives kanye nokulayishwa okuqinile, ukusebenza okulula nokuphephile, ukulungiswa okuphansi nokuqina.
Izinzuzo ze-Ultrasonic High Shear Mixers
I-Hielscher Ultrasonics ephezulu yokusebenza kahle ingasetyenziselwa i-batch kanye ne-inline process. Ngokuya ngevolumu yenqubo yakho nokungenela kwehora, ukucubungula okungaphakathi kunganconywa. Ngenkathi ukuganana kunesikhathi esithe xaxa futhi kubhekene nabasebenzi abaningi, inqubo eqhubekayo yokuxuba imigqa isebenza kahle, ngokushesha futhi idinga umsebenzi omncane kakhulu.
Isilinganiso-esivela kusihlanganisi esincane se-ultrasonic siye kumandla aphezulu wokucubungula silula kakhulu ngoba inqubo yokuxubha ye-ultrasonic ingalinganiswa ngokuphelele emugqeni wakho wenqubo osunguliwe. Ukulinganisa phezulu kungenziwa ngokuthi kufakwe iyunithi yokuxuba i-ultrasonic enamandla kakhulu noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningana ngokufana.